Famantarana ny aretim-po amin'ny fijerena-ary AI sasany
Aretim-po vao hita amin'ny fijery-ary ny sasany AI
Google mpikaroka milaza ny algorithm vaovao dia afaka mahita ny vintana ny aretim-po.
Mpikaroka avy amin'ny Google sy ny mpiray tam-po orinasa tokoa Fiainana Sciences, nanambara fa ny mitily ny indray ny mason'ny marary ny fahaizana artifisialy vaovao algorithm afaka hijery risika ho an'ny cardiac olana.
Ny fianarana, nivoaka tao amin'ny gazety Nature Biomedical Engineering, manolo-kevitra fa amin'ny alalan'ny fandinihana ny notarafina, ny AI algorithm dia afaka mamantatra aretim-mety antony, toy ny olona ny taona, lahy sy ny vavy sy ny tosidra. Ny fandinihana dia afaka milaza mialoha mety ny aretim-po sy ny tapaka lalan-dra.
Io fomba vaovao afaka nanolotra ny haingana sy mahomby kokoa noho ny nentim-paharazana fandalinana fitiliana ra. Hatramin'izao aloha, ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny AI algorithm vokatra ireo teny mafy toy ny marina toy ny amin'izao fotoana izao fomba.
Manokatra ny fikarohana ho an'ny AI kokoa ny fahafaha-nampidirina ho fanatsarana ny hopitaly eo amin'ny fomba fanao. "Tahirin-kevitra ry zareo maka izany voasambotra noho ny antony iray pitsaboana sy nahazo bebe kokoa avy ao aminy noho isika ankehitriny aza. ... Tsy fanoloana dokotera, Izany dia midika hoe miezaka ny hanitatra ny zavatra azontsika tena atao, "Lioka Oakden-Rayner, mpitsabo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Adélaïde, izay specializes amin'ny milina hianatra fanadihadiana, nilaza The Saika.
Fotoana fandefasana: Aug-10-2015